16 Waxyaabood Oo Qiimo Badan Oo Laga Rabo Waalidiintu Inay Baraan Ubadkooda - Daryeel Magazine
16 Waxyaabood Oo Qiimo Badan Oo Laga Rabo Waalidiintu Inay Baraan Ubadkooda
1. Ilmahaagu haddii uu Khalad Galo si Naxariis ah u Dareensii, hana u Ciqaabin haddii Khaladkaasi yahay midkii ugu horeeyay oo uu galo. Kula balan ilmaha inuusan Mar kale Khaladkaasi oo kale galin una sheeg inuu yahay wax aan wanaagsanayn.
2. ku Tarbiyee ilmahaaga inta uu yar-yahay Nadaafadda iyo Is-Qurxinta, Bar sida loo weysaysto kuna dhiiri gali markii uu si wacan u weysaysto ama uu Jirkiisa iyo dharkiisaba nadiifiyo, sidoo kale bar inuu Cidiyaha iska jaro gacmahana dhaqdo marka uu cuntada cunayo iyo marka uu dhameeyo ka dib, (Hadaad rabto inaad Ogaato Nadaafadda Hooyada fiiri ilmaha ay dhashay Nadaafadooda) (Hadaad rabto inaad ogaato Diinta Qoys fiiri ubadkooda).
3. Ilmaha inta uu yaryahay bar Aadaabta Seexashadad sida:-
Inuu xidho Dharka u gaarka ah Jiifka ka hor inta aanu furaasha tagin.
-Inuu uu soo salaamo Qoyska kheyrna u rajeeyo. Inuu Furaashkiisa iska nadiifiyo ka hor inta aanu ku seexan. Inuu Naftiisa xisaabiyo intaanu seexan ka hor gaar ahaan wixii uu maalintaasi sameeyay. Waa inuu dhinaca Midig u seexdo Adkaarta ka soo aroortay Nabigeenana(NNKH) uu Akhristo.Marka uu hurdada ka soo kacana waa inuu Akhristaa Adkaarta Subaxdii la Akhristo.
-Waa inuu Cadaysto .Waa Inuu iska badalo dharkii uu Habeenkaasi ku seexday .Waa inuu Waalidkiisa iyo Qoyskaba guud ahaan salaamo.
-Waa Inuu wax uun ka Akhristo Qur’aanka.
4. Bar ilmaha inaysan Wasaqda ku tuurin Wadada Gurigana dhex dhigin, ku bar-baarin in wixii Dadka dhibaato ku ah wadooyinka uu ka qaado, kuna Tarbiyee inaysan Fiicnayn in Wasakhda lagu tuuro ama la dhigo Meelaha aan loogu talo galin, arintaasna ilmaha waxay dhaxalsiinaysaa inuu barto Qaadida Mas’uuliyada.
5. Bar Caruurta sida ugu Wanaagsan ee loo Tukado Salaada looguna khushuuco.
6. Gabdhahu inta ay yar yihiin Jeclaysii Qaadashada Xijaabka, kuna amaan markay xidhantahay xijaabka adigoo u sheegaysid inau ku qurux badantahay.
7. Bar Caruurta Maah-maahyada, Gabayadda iyo Suugaanta inteeda Wanaagsan.
8. U Samee Caruurta Maktabad u gaar ah, uguna dar inaad u keento Computer ay ku jiraan Barnaamijyo Nafci u leh.
9. Xooga saar inaad Caruurta uga sheekayso Qisoyinka Anbiyada, Saxaabadda iyo Salafkii wanaagsanaa, hadaad awoodinna u keeno Cajalo ay ka bartaan lana dhageyso.
10. Haddii aad Ilmaha Shay farto ku dabo gal fulintiisa, sida inuu Bisinka ku bilaabo markuu Cuntada cunayo, Gacanta Midigna wax kunayo, Adkaartana akhristo, Guriga markuu soo galayana Soo idan qaadanayo, IWM.
11. Waligaa Caruurtaada ha is-bar bar dhigin oo ha dhihin kan ayaa fiican kana waa Doqon ahbal ah, arintaasi waxay caruurta ku abuuraysaa inay Dhexdooda Colaad isku qaadaan.
12. Ilmaha ku tarbiyee Marka uu Madarisada galo Aadaabtan:-
Inuu ixtiraamo Macallinkiisa iyo Saaxiibadiisa.
Inuu Macalinka si wanaagsan u dhageysto marka uu Casharka Sharaxayo oo uu san meelo kale fiir fiirin ama uusan farakaciyaarin.
Inuu si wanaagsan Su’aalaha u weydiiyo Aabaha, Hooyada iyo Macalinka ka dibna u Mahadceliyo marka looga Jawaabo.Inuu si wanaagsan u Nidaamiyo Wakhtigiisa (wakhti waxbarasho, Wakhti Ciyaar, Wakhti Jiif IWM). Inuu Saaxiibadii jeclaado si wanaagsana ula dhaqmo marka la joogo Fasalka iyo Garoonka Ciyaaraha.
13. Marka aad ilmahaaga u Naseexaynayso si hoos wax ugu sheeg, Waligaana Dadka hortooda ha ku ciqaabin hana ku canaananin.
14. Bar Caruurta inaysan Maalaayacni ku soo jeedin Habeenkii, meel Mugdi ahna aysan Seexanin.
15. Ku Tarbiyee Caruurta marka ay cunayaan ama Cabayaan inay ku Bilaabaan Bisinka,
16. Bar Caruurta Samirka iyo inaysan Eed Sheegan, ilaahayna ay Kaalmo weydiistaan isaga kaligiina ay Baryaan.
Duruusta Nolosha (Talooyin Qiimo Badan)